Bekee Beijing na saladji salad: ihe a na-ese siga na akwukwo nri Chinese tinyere ọka, croutons, kukumba ohuru na ihe ndi ozo n'ime nhazi akwukwo ndu na foto - Akwukwo nri - 2019
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, Beijing Beijing aghọwo ihe a ma ama na mba anyị. Ọtụtụ mgbe, a na-eji ya iji kwadebe salads dị mma, na-eji ọtụtụ efere kama na-acha ọcha. Osisi na-adabere na peking dị nro, nwee nro dị ụtọ, dị mma maka ahụ.
Ihe akwukwo nri nwere ihe omuma, vitamin B6, B9, C, K. Ọ bụ onye ọbịa na tebụl n'oge nkịtị, maka ezumike. N'ijikọta ya na ụdị nsị dị iche iche, Beijing Beijing na-aghọ ihe na-achọsi ike ọbụna maka ụmụaka.
Aro maka ịhọrọ ngwaahịa anụ
Rụgharịa site na nzọụkwụ na foto
Nhọrọ ndị dị mfe ma dị ụtọ
Kedu otu esi eje ozi?
Uru na mmerụ nke efere na anụ ndị na-ese siga na ndị ọzọ
Dị ka ihe oriri, kabeeji Beijing nwere ọtụtụ mmiri na nri. Na mgbakwunye na vitamin, ihe ndị dị na ya, ngwaahịa ahụ nwere 1.46% nke ndị na-edozi ahụ, 0.31% abụba, 1.56% nke ndị na-emepụta mmanụ aṅụ. Ihe oriri bara uru nke 100 grams nke kabeeji bụ 16 kcal.
Ndị a A na-esi nri anụ, na-ese anwụrụ, na-esi ya, na-ese anwụrụ, na-aṅụ sịga, nke a rụziri n'ụlọ. A na-enweta ụdị dịgasị iche iche site n'usoro nkwadebe, ihe eji eme ihe. Maka salads na kabeeji kabeeji kacha mma a na-ese anwụrụ, na-ese anwụrụ, sieseji socha.
Uru nke efere a bụ ihe efu n'ihi enweghị ike ịchọta ogo, usoro nkwadebe, yana ịmepụta ihe ọkụkụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọdịnaya kwekọrọ na ngwugwu a gosipụtara na nkwakọ ngwaahịa ahụ, ngwaahịa anụ ahụ bụ ngwaahịa na-edozi ahụ nke nwere nnukwu ọdịnaya nke ihe ndị na-achọpụta na ndị na-edozi ahụ. Ihe mejupụtara nke ngwaahịa a dabere na otu ụdị anụ ngwaahịa, ụdị ya.
Maka anụ a na-ese siga "Moscow" Ụkpụrụ oriri na-edozi ahụ bụ protein 23.29%, 56,1% abụba, 0,16% carbohydrate. Nutritional value of 100 grams 406 kcal.
Na sie iche "Dọkịta" ihe oriri edozi: 15.61% protein, 34.15% abụba, 1.17% carbohydrate. Nri bara uru nke 100 grams nke ngwaahịa 257 kcal.
Na-adịghị mma na-ese siga "Nri" nwere 1.22% nke protein, 96.69%, enweghị carbohydrates. Nutritional value of 100 grams 606 kcal.
Ejighị ọgwụ ndị a kwadoro iji ngwaahịa ndị a kwadoro maka ndị nwere ọnọdụ ahụike:
akụkụ ọnyà digestive;
Soseji bụ ihe na-edozi ahụ, nke na-ewu ewu nke ọma maka salads.. Ihe kachasị mma bụ enweghị mkpa maka nkwadebe mmemme: nchịkọta, esi nri, wdg. O zuru ezu iji wepu ihe nkiri nri ahụ, gbanye ego a chọrọ.
Maka nri iri nri, a na-atụ aro ka ị jiri ngwaahịa anụ ndị nwere oke abụba ọdịnaya, uru dị ala. A na-eji nri ndị na-edozi ahụ eme ihe dị ukwuu maka anụ ụlọ.
Ngwaahịa a na-aga nke ọma na ụdị nri ọ bụla, ihe ejiji salad, Mayonezi ma ọ bụ butter. Ufodu di iche iche nwere ihe ndi ozo di iche iche, ya mere, eji ha ejikere ya na osere, ose uto.
Chee echiche banyere otu esi esi nri dị ụtọ. Salads niile nwere ihe ndị bụ isi:
Egwuregwu Beijing - 250 g
Otu n'ime ụdị anụ ndị a gụnyere n'ime uzommeputa: smoked, half-smoked, boiled and components: crackers, ọka, kukumba ohuru, tomato, cheese, peas, egg, crab sticks, greens, pomegranate.
Ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ bụ ndị e depụtara na ha.
Nhọrọ nọmba 1
Smoked iche dị mma ruru - 200 g.
Mkpọ ọka - 60 g.
A na - ahọrọ Mayonezi maka mmanu - 230 g.
Nkezi mkpọ nke rye crackers - 60 g
A na-edozi ihe niile edozi, kpochaa, kpochapụ, kabeeji.
Nwuo na nnukwu efere salad.
Jupụta na Mayonezi, jiri nwayọọ gwakọtara.
Nhọrọ nọmba 2
Sie ngwaahịa - 300 g
Kukumba - 1 PC.
Otu apụl. - ½ pcs
Mkpọ ọka - 100 g
Dị ka mgbakwasa - obere abụba Mayonezi - 230 g.
Kwadebe ngwaahịa, belata eriri.
Dicha ọka ahụ, jikọta ngwaahịa niile na nnukwu ite.
Oge na Mayonezi, jikọta ọzọ.
Ọ ka mma iji gwoda cheese - 180 g, ma ọ nwere ike dochie anya ọzọ siri ike.
Ụdị anụ ndị a na-aṅụ smoked - 250 g
Mkpọ ọka - 120 g
Iji mee ka uto - nnu, ose, Mayonezi dị ka mgbakwasa - 230 g.
Kwadebe, kpochapụ ihe niile dị na efere ahụ, kpocha ọka.
Eberi swi n'ime iberibe, gbutu peking, cheese cheese na akwukwo ogwu.
Gwakọta ihe niile dị elu.
Nnu nụrụ ụtọ, oge na ose, igwakorita.
Tinye Mayonezi, re-mix.
Elu - 1 ụyọkọ.
Mma anụ esie ya iche - 250 g
Obere abụba Mayonezi kacha mma maka mgbakwasa - 230 g.
Ghọta akwụkwọ nri niile, gbutuo, tinye ya na nnukwu efere.
Dicha ọka, gbanye elu, gbakwunye na ngwaahịa ndị ọzọ.
Nnu, ose na-atọ ụtọ, mix.
Tinye Mayonezi, jikọta ọzọ.
Anyị na-enye gị nri salad kabeeji na sausaji na ọka dịka usoro ntinye vidiyo:
Eyịm - 1 pc.
Smoked na ngwaahịa - 250 g
Kwadebe, kpochapu ihe niile.
Tinye na nnukwu efere salad, mix.
Tinye uhie na oji oji ka o sie uto, nnu.
A sie anụ iche iche na-eji - 300 g.
Kasị mma chiiz - 120 g
Ngwurugwu Chicken - 2-3 iberibe, ọ bụ ezie na quail ga-aga nke ọma - 6-7 iberibe.
Sie carrots - 1 PC.
A chọrọ olive maka ihe mma - 1 pc.
Obụpde carrots, àkwá, bee, bee n'ime mpekere.
All ngwaahịa bee n'ime cubes, grate cheese.
Dicha ọka ahụ, tinye ihe niile dị na akwa akwa.
Ebido, nnu, ose, tinye Mayonezi.
Ghọta ihe niile.
A na-ejikọ ihe ndị a na-etinye na ya na salad. Ị nwere ike iji ihe ọ bụla pickled, dị ka mushrooms.
Anyị na-enye gị nri salad kabeeji na soseji na kukumba:
Ọ ka mma ịhọrọ ụdị ọka beef - 250 g.
Chicken nsen - 4-5 PC.
Tinye peas mkpọ - 120 g
Maka na-agba mmanụ - 2-3 sprigs.
Mayonezi - 230 g
Ntucha ma ọ bụ garlic abụọ.
Nnu na ose.
Nri nile, àkwá, anụ esi nri, dị ọcha, bee n'ime ibe.
Iji na-agba mmanụ ọkụ, chopped garlic, weere ya na Mayonezi.
Mịnye peas, gbakwunye na ihe ndị ọzọ.
A na-edozi salad, re-kneaded.
Nri akụkụ nke salad - smoked iche - 270 g
Chiiz ga-esi ike - 180 g
Ngwongwo Quail - 10-12 pcs.
Na akwụkwọ nri - kukumba - 1 PC. na carrots - 1 PC.
Obụpịa ihe ndị ahụ, dị mma, bee n'ime ibe.
Obụpde quail nsen, rob.
Egwu kabeeji, carrots na cheese grate, anụ, kukumba ịkpụ n'ime obere mkpa.
Ihe oriri niile ma e wezụga nsị mix, oge na Mayonezi.
Tupu ị na-eje ozi, na-etolite akwu, dina akwa na etiti.
Salad enweghị ike ịgwakọta, ma dina n'osisi na usoro a: anụ, soseji, kabeeji, kukumba, carrots, àkwá, cheese.
Anyị na-enye ya nri salad si na Peking kabeeji, soseji na àkwá:
A na-eji anụ a na-ese anwụrụ ọkụ - 200 g.
N'ihi na ejiji kwesịrị diluted na utoojoo ude na Mayonezi - 130 g ọ bụla, seasoned na elu - 1 ụyọkọ.
Iri akwukwo akwukwo nri, gbutu tomato, yabisi, ma kpochapu anu ohia.
Grate cheese, iri elu.
Ikpokọta na miri miri, nnu, ose na-atọ ụtọ, mix.
Tinye mmanu mmanu, kpoo ozo.
Ịgbakwunye ọka ọka na salad a ga-eme ka ọ dịkwuo nro.
Ụdị anụ ọ bụla a na-ese anwụrụ dị mma - 200 g.
Ngwakọta Chicken - 3-4 PC.
Maka refueling mkpa Mọstad - 1 tbsp. l., elu - 1 ụyọkọ, Mayonezi - 230 g
Bee ihe ndị bụ isi.
Grate cheese na grater, jikọta na ihe ndị ọzọ, nnu na ose.
Sichaa àkwá, bee ma ọ bụ mpekere dị ka tomato.
Maka mgbakwasa mix Mayonezi na mọstad, gbakwunye na efere salad.
Ngwakọta nile, àkwá, tomato, tinye n'elu efere ahụ.
Ihe dị mma na ụdị ọkara anụ - 250 g
Udara Tomato - 200 g
Bulgarian ose - 1 pc.
Maka ihe mgbakwasa, a na - ahọrọ otu mọstad French - 60 g, mmanụ aṅụ mmiri - 50 g, soy ihendori - 25 g, ihe ọṅụṅụ lemon - 15 g, olive mmanụ - 50 g.
Ghota kporo ose, kabeeji, zigara nnukwu efere salad.
Bee n'ime ihe ntanetị anụ, anụ anụ, zigara akwụkwọ nri.
Kwadebe ihe ejiji - mix mọstad, mmanụ aṅụ, butter, ihendori, wunye n'ime efere salad.
A na-egbutu ya na ọkara, na-etinye ya na salad a gwara ọgwa.
A na-enweta uto dị mma na ọkara ọkara-smoked amịrị dị iche iche - 200 g.
Chiiz - 150 g.
Ụtọ na utoojoo apụl - 1 PC.
Mayonezi maka refueling - 230 g
A na-ebipụta ihe ndị dị n'ime cubes, jikọtara na akpa miri emi.
A na-agbakwunye Mayonezi, ihe niile na-agwakọta, salọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Nshịkọ dị - 200 g
Esi ya iche - 300 g
Nsen - 4-5 pcs.
Etu - 1 mkpọ buru ibu.
Ọla 1 ụyọkọ.
A kwadebere akụkụ niile nke efere, bee n'ime ibe.
A na-etinye ha n'ime mmiri miri emi.
Nnu, yiri akwa mayone.
Na-eme nke ọma, tinye croutons.
Ịgbakwunye ihe ndị e ji esi mmiri sie na efere ga-eme salad zuru oke.
Smoked beef dịgasị iche iche - 250 g
Tinye nshịkọ - 200 g.
Lemon ihe ọṅụṅụ - 15 g.
A na-ebipụta ihe niile dị n'ime cubes, cheese bụ akwụkwọ.
Mix, na-etinye ya na ihe ọṅụṅụ lemon, salted, mixed.
Jupụta na Mayonezi, gwakọtara ọzọ.
Nri anụ dị iche - 300 g
Peas - 150 g
A ngwakọta nke pasili ma ọ bụ basil kwesịrị ekwesị maka mgbakwasa - 2-3 sprigs na Mayonezi - 230 g.
Ose na nnu.
Ngwa niile na-agbaba n'ime obere cubes.
Ube ntan, gbakwunyere ihe ndi ozo n'ime nnukwu efere salad.
Ihe niile na-eyi na Mayonezi, agwakọta.
Tupu na-eje ozi, a na-eji ya na spars nke pasili ma ọ bụ basil chọọ ya mma.
Sie dị iche iche - 300 g
A na-edozi ngwaahịa niile, tinye ya na nnukwu nnukwu efere.
Esi sie ike, agbakwunye na mmiri ndị ọzọ, weere, salted ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ejiri ya na Mayonezi, gwakọtara ya.
Anyị na-enye iji kwadebe salad na kabeeji Chinese, soseji na peas mkpọ:
Kasị mma niile jikọtara na smoked iche anụ ngwaahịa - 250 g.
Obere abụba Mayonezi - 230 g
A na-ebipụta ihe ndị dị n'ime ibe, na-achachasị elu, ihe niile dabara na nnukwu efere salad.
Sie, kpochara, bee àkwá, gbakwunyere ihe ndị ọzọ.
A na-etinye ihe niile salted, Mayonezi, elu gwakọtara elu.
A na-eji smoked iche - 250 g.
Mkpọ mkpọ - 120 g
A na-agbazi ngwaahịa niile n'ime cubes, tinye ya na efere dị elu, nke agwakọta.
A na-egbutu eyịm na-acha akwụkwọ ndụ, a na-agbaze peas, zigara ngwaahịa ndị ọzọ.
Ihe niile na-agwakọta, na-eji ya na mayonezi, salted nụrụ ụtọ.
Jiri ihe ngwakọta nke chopped dil na pasili.
Onu ogugu umu anu ocha - 250 g
Mkpọ pea - 150 g
Mkpụrụ ọka na mkpụrụ pọmigranet 1.
Mayonezi nwere obi ike - 230 g.
Bee ihe ndị bụ isi na ụdị free, na-etinye na nnukwu efere salad.
Obụpde, bee akwa, bee n'ime mpekere.
Mix Mayonezi na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ pọmigranet, oge ihe oriri salad, bido.
Tupu ị na-eje ozi, dina nsen, kpuchie mkpụrụ pọmigranet.
Smoked iche - 200 g.
Sie carrots - 1-2 PC.
Poteto - 1-2 PC.
Ọhụrụ eyịm - 1 PC.
Avocados na pọmigranet - 1 pc.
Nri walled - a njuaka.
Maka ịjuputa, abụba abụba Mayonezi ga-adaba - 230 g, mmanụ sunflower - 100 g, ngwa nri.
Obụpde mgbọrọgwụ na àkwá, dị jụụ iji wepụ.
Grate niile sie grated, iri ihe ndị ọzọ nke ngwaahịa na cubes.
Were mkpụrụ pọmigranet, kewaa ọka, ma chịkọta ha niile n'ime ihe ndị dị iche iche.
N'etiti etiti nnukwu efere, a na-etinye otu nnukwu iko nke na-etinye nri salad n'ime ihe ndị na-esonụ: ọkụkọ, ngwa nri, carrots, poteto, ube oyibo, mkpụrụ, kabeeji, beets, eyịm, ọkụkọ ọzọ.
A na-ejikọta oyi akwa ọ bụla na Mayonezi.
A na-etinye mkpụrụ osisi pọmigranet n'elu efere.
Salad abụghị ihe efu. Ngwurugwu niile nwere ike ibubata.
Sie iche anụ ngwaahịa - 250 g
Ọhụrụ kukumba - 1 PC.
A na-emebi ihe niile, na-etinye ya na nnukwu nnukwu efere, weere.
Egwu na-agbanye, gbakwunyere na ngwaahịa ndị ọzọ.
Ihe niile na-agwakọta ya, tupu ọ na-eje ozi, ọ nwere ike ịme ya mma.
Smoked iche anụ ngwaahịa - 200 g.
Mkpọ ọka - 150 g.
Ewere Mayonezi maka mmanu - 230 g na elu - 1 ụyọkọ, chopped chopped. Ose, salted, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
A kwadoro ihe niile dị iche iche, na-agbaba n'ime cubes.
A na-amị ọka ma gbakwunye ihe ndị ọzọ fọdụrụ na nnukwu efere akwa salad.
Akpọrọ ya elu, tinye ya na efere, salted, yi uwe na Mayonezi.
A na-eweghachi ihe niile.
A na-enye salad a ọrụ na tartlets.
Akwukwo nri kabeeji Chinese di na akwukwo aka.ya mere, ọ dịghị mma ịmepụta ihe ọ bụla dị nkenke maka nkwupụta ha. Nke kachasị bụ ọrụ na akwukwo kabeeji, ihe mma nke ngwaahịa abụghị akụkụ nke ihendori na-adịghị edozi ya na ihendori. Ọzọkwa na mgbakwunye nke mpekere akwa, elu ma ọ bụ ihe nkedo nke kukumba ọhụrụ zuru okè.
Maka salad ọka na Chinese na sausaji, ị nwere ike iji mgbazi pụrụ iche pụrụ iche ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ eji emezi ihe. Ihe ngosi a bụ nke mbụ, ọ ga-emesi ike na-eri nri.
Mkpụrụ ọka na kabeeji Chinese na otu n'ime ụdị sausaji nwere nnukwu ihe oriri na-edozi ahụ, uto dị mma. Saturation nke microelements, dum mgbagwoju nke vitamin, bake epupụta na-eme ka a mata na uru nke efere. A na-eji okpukpu a ghaghị gbanwee ma saa ya na ngwa ngwa nke ngwaahịa ndị dị na ya na efere na ihe efu. Ọ dị mkpa na ọ na-atọ ụtọ, na-eme ka anya na anya.
Na-eto eto na-eto eto, ma dị ezigbo uru dị iche iche na obere mkpụrụ osisi - ube Thumbelina
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Nri ndị dị ụtọ na dịgasị iche na Chinese kabeeji na sausages: smoked, sie na ndị ọzọ iche